Thuli NgoJan 23, 2020
Ndikhe ndaphola, ngoku ndi…
Intombazana efile yeKofu
New Lil Elfie oopopayi
kwiiveki 2 ezidlulileyo Zolile
Entsha yeCamo Lil Elfie
kwiinyanga 2 ezidlulileyo Zolile
Kutshanje ku-Lil Elfie
Nxibe Isitalato esitsha
kwiinyanga 3 ezidlulileyo Zolile
Skinni Kat Umboniso 3
Skinni Kat Umboniso 2
Ibhulogi yokuqala ka-Coolordrool!
kwiinyanga 7 ezidlulileyo Zolile
Siyavuya ukuba uyifumene iFordordrool!
Usenokuba usifumene kuFacebook kunye nenye yeakhawunti ezikhomba apha (umzekelo, Facebook.com/Coolordrool, Facebook.com/SkinniKat, Facebook.com/Reallilelfie, okanye Facebook.com/DeadGirlCoffee).
Ewe, i-Coolordrool yaqalwa ngoMeyi 2019. Ke simtsha kakhulu.
Oku ikakhulu iwebhusayithi yolonwabo njengoko sibonisa iiMifanekiso ezisuka kubaculi abahlukeneyo.
Siyindawo ekhethekileyo ye Ukunxiba kwesitrato iimveliso, iimpahla ezivela Skinni Kat, Lil Elfie kwaye Intombazana efile yeKofu.
Ukuba uthanda ukuthenga uSkinni Kat, uLil Elfie okanye intombazana efileyo yeKofu, njengee-T-shirts, ii-hoodies nokunye okunjalo - ukunxiba esitratweni- nceda ucofe iimveliso ikhonkco kwimenyu.
Qiniseka ukuba ucofa 'Gcwalisa Okuninzi'ukuzisa yonke imifanekiso!
Kuya kukusa kwikhathalogu yemveliso kwaye emva koko Shopify ukuphuma kwakho.
Singathumela iimpahla ezintle naphi na emhlabeni kwaye isiseko sekhaya seengubo ILos Angeles, California, USA.
Nantsi into esingakwaziyo ukubonisa kuluhlu lweMveliso, kwaye loo nto 'yongeziweyo' eyongeze izinto zethu kwaye zinokukwenza upholile.
Iimpawu zethu zelebheli ezilukiweyo, kunye nezethu IKten Flying Kitten emnyama isuka kwi-Coolordrool, ethunwe kuyo yonke imveliso (nokuba ngu-Lil Elfie, Skinni Kat, coffee Girl) ... sithunyelwa ngenqanawa (ngokufuthi kwicala lasekhohlo, kumqolo osekhohlo).
Le Kitten Flying Kitten ikwi-Tag (loo nto icaphukisayo ngaphakathi kwehempe enika ulwazi malunga nokuba ngubani owenzileyo). Ipholile, huh?
Nanku umfanekiso wento esiyithethayo:
Sisebenza ukongeza ulwazi olutsha, ubugcisa, umculo kunye neevidiyo njengoko sinakho. Ukuba uziva unje, unganikezela ngombono wakho malunga nento ("Ngaba ucinga le okanye ipholile, Meh, okanye Drool?").
Sikwanayo ikhonkco mahala Arcade iimidlalo yevidiyo.
Kukho ezinye izinto kwaye songeza apho sinakho.
Sine 'rudimentary' inkqubo esekwe kuBhaso kuwe ngokuba ulapha, uvota ngezinto, njl njl Imbuyekezo yeCoinordrool yengqekembe inkqubo. Nje ukuba iphuculwe, iya kuthatha inxaxheba yakho, kwaye uya kufumana imali, iingqekembe, izaphulelo kubathengisi. Njenge a Co-op? Yinto-Co-op.
Ke nceda hlala ubukele kwaye uxelele abahlobo bakho.
Ukwenza oko, sinekhonkco lethu leMidiya yoLuntu (amaLungu, uMsebenzisi). Ukuba ubhalisa, uya kubona iiMali zokuqala ziza ngendlela yakho! (Ingene kwiakhawunti yakho.)
Copyright © Wonke amalungelo agcinwe.
Ifaka inqwelo ⌛️ ...